मेरो सोर सुन्ने सबै भाइ-बहिनीहरूलाई: तिमीहरूले मेरो कठोर न्यायको आवाज सुनेका छौ र तिमीहरूले चरम कष्ट भोगेका छौ। तापनि मेरो कठोर सोरको पछाडि मेरा अभिप्रायहरू लुकेका छन् भन्‍ने तिमीहरूले जान्‍नुपर्छ! तिमीहरूले मुक्ति पाउन सक भनेर म तिमीहरूलाई अनुशासनमा राख्छु। तिमीहरूले जान्नुपर्छ, म मेरा प्रिय छोराहरू, तिमीहरूलाई निश्‍चय अनुशासनमा राख्छु र तिमीहरूलाई छिँवल्छु र चाँडै नै तिमीहरूलाई पूर्ण बनाउँछु। मेरो हृदय अत्यन्तै उत्सुक छ, तर तिमीहरू मेरो हृदयलाई बुझ्दैनौ र तिमीहरू मेरो वचनअनुसार काम गर्दैनौ। मेरा वचनहरू आज तिमीहरूमाथि आउँछन्, जसद्वारा तिमीहरू परमेश्‍वर साँच्चै एक प्रेमिलो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी जान्‍नेछौ र तिमीहरू सबैलाई परमेश्‍वरको साँचो प्रेम अनुभव गराउँछ। तापनि, थोरै सङ्ख्याका मानिसहरू पनि छन् जसले बहाना गरिरहेका छन्। जब तिनीहरू अरू मानिसहरूको दु:ख देख्छन्, तिनीहरूले उनीहरूको नक्कल गर्छन्, अनि तिनीहरूले पनि आँखामा आँसु झार्छन्। अरू पनि छन्—जो बाहिरी रूपमा परमेश्‍वरप्रति ऋणी भएको जस्तो देखिन्छन् र तिनीहरू पछुताएका जस्ता देखिन्छन्, तर भित्री रूपमा, तिनीहरूले साँचो रूपमा परमेश्‍वरलाई चिन्दैनन्, न त तिनीहरू उहाँबारे निश्चित नै छन्; बरु, तिनीहरूले बाहिरी रूप मात्र प्रस्तुत गर्दैछन्। म यी मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी घृणा गर्छु! ढिलो चाँडो, यी मानिसहरूलाई मेरो सहरबाट अलग गरिनेछ। मेरो अभिप्राय यही हो: म ती मानिसहरू चाहन्छु, जसले उत्कटताको साथ मेरो चाहना गर्छन्, र मलाई साँचो हृदयले पछ्याउनेहरूले मात्र मलाई खुसी पार्न सक्छन्। यी त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसलाई म निश्चित रूपले आफ्नै हातले सहायता गर्नेछु, र तिनीहरूले कुनै विपत्तिको सामना गर्नु नपरोस् भन्‍ने म निश्चित गर्नेछु। साँचो रूपमा परमेश्‍वरलाई चाहने मानिसहरूले परमेश्‍वरको हृदयलाई ध्यान दिन र मेरो इच्‍छा पूरा गर्न इच्छुक हुनेछन्। यसैले, तिमीहरू चाँडै वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुपर्छ र मेरो वचनलाई तिमीहरूको जीवनको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ—यही नै मेरो सबैभन्दा ठूलो बोझ हो। यदि मण्डलीहरू र सन्तहरू सबै वास्तविकतामा प्रवेश गर्छन् र सबैले प्रत्यक्ष रूपमा मसँग सङ्गति गर्न, मेरो आमनेसामने हुन र सत्यता र धार्मिकताको अभ्यास गर्न सक्छन् भने मात्र तिनीहरू मेरा प्रिय छोराहरू हुनेछन्, जसमा म प्रसन्न हुन्छु। यिनै मानिसहरूलाई म सबै महान् आशिषहरू प्रदान गर्दछु।